अब एमालेले जितेको कुरा कुनै पनि पत्रकारले लेख्ने अवसर पाउने छैनन् : मेटमणि चौधरी – Cn Chautari
माघ १३, २०७८ बिहिबार 157
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रभावशाली नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीले अबदेखि एमाले र विजयीको बीचमा कहिल्यै भेट नहुने दाबी गरेका छन् । चौधरीले एमालेले जितेको कुरा कुनैपनि पत्रकारले लेख्ने अवसर नै नपाउने पनि ठोकुवा गरेका छन् ।
उनले एमालेले २०७४ सालमा जितेको कुरा अब कथा बन्ने र भावी सन्ततिहरुलाई सपनाजस्तै लाग्नेपनि उल्लेख गरेका छन् ।सामाजि क सञ्जालमार्फत उनले यस्तो लेखेका छन् । हेरौं उनको स्टाटस :प्रतिगामि गठबन्धन- नेकपा ।
एमाले, जसपा ( महन्त ठाकुर ) र राप्रपा बिचकाे गठबन्धनकाे शर्मनाक हार भएकाे छ । हारकाे लाज छाेप्न केपिका चाकरहरू SIngle नेकपा एमालेलाई ५ दलिय गठबन्धनकाे हुइँया मच्चाइरहेका छन् । याद हाेस दास/ दासिहरूलाई – चुनावि माेर्चामा उभिइसकेपछि मुख्य कुरा जित्नु हाे ।
चाहे एकलै हाेस या मिलिजुलि । मिलेरै / मिलाएरै जित्ने हाे । एकलकाँटे तिमिहरू बरू साेँच – हामी किन कसैसँग मिल्न सकेकाे छैनाै ? हामी दैनिक जस्ताे किन एकलिरहेका छाै । सरकारकाे नेतृत्वबाट प्रतिपक्षिकाे भुमिकामा कसरी झर्न पुगिम ।
के याे बिषयमा कहिले सिहलाेकन गरेका छाै ? तिम्रा यिनै घमण्डकाे कारण अाज बिचारा भएका छाै ।दासहरूले के पनि भुल्नु हुँदैन भने- २०७४ सालकाे चुनावमा माअाेबादिसँग चुनावि एकता गरेकाे कुरा, झापामा राप्रपालाई ।
उम्मेदवारिमा सघाएकाे र त्यसबाफत मत पाएकाे, धनुषामा राजेन्द्र महताेलाई मत बेचि अरू ठाँउबाट असुलि गरेकाे, नवलपरासि, रूपन्देहि र कपिलबस्तुमा गैर एमालेका नेताहरूलाई सुर्य चिन्ह दिएर अरू निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्रहरूका मत प्राप्ति गरेका !
उक्त सबै कार्य तिमिले बा भनेका खड्गा प्रसाद अाेलिले गरेका हाेइन्न ? दास बन्नु/ हुनुकाे पनि सिमा हुन्छ ! जसले सबैभन्दा बढि दलहरूसँग सहमति र अबैध संझाैता गरेका छन् ! तिनैका सन्तान हरू गठबन्धनका बिरूद्दमा बिष बमन गर्नु कत्ति पनि सुहाएन क्या !
Prevमहाकालीमा युद्द शुरु, आँखै अगाडी भारतले जबर्जस्ती सिमा मिचेपछि नेपाली सेनाले चलायाे गाेली
Nextइण्डियन लाहुरेकी श्रीमतीलाई नेपाली लाहुरेले उडाइदिए (भिडियो हेर्नुस)